२०७७ मङ्सिर ६ शनिबार ००:४५:००
‘मैले अस्ति दुईजना कमरेडहरूलाई बोलाएर कुरा गरेँ, वामदेवजीसँग कुराकानी गरेँ र भनेँ कि यसको छिनोफानो नभईकन, यी आरोपहरूसहित, यी आरोप बोकीबोकीकन कोही पनि मानिस अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बस्न त मिल्दैन । यी आरोपहरू या त त्यसबाट बदर हुनुपर्‍यो, तब प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको जिम्मेवारीमा बस्न मिल्छ । त्यसो होइन भने सदर हुनुपर्‍यो र ती पदहरू र ती जिम्मेवारीबाट हट्नुपर्‍यो,’ ओलीले पछिल्लो सचिवालय बैठकमा भनेका थिए, ‘यो आरोप या त सदर ठहरिनुपर्‍यो, अनि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हट्नुपर्‍यो । यो आरोप सही ठहरिँदैन भने यस्तो आरोप लगाउनेले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो, यसको जवाफदेही लिनुपर्‍यो ।’
दुई अध्यक्ष मिलेर सहमति गरेर विवाद समाधानका लागि कार्यदल नबनेको भए, सहमतिको आधारमा प्रस्ताव सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नभएको भए सहमति हुँदैनथ्यो । त्यही आधारमा स्थायी कमिटीले निर्णय गर्‍यो । तर, सचिवालयमा भएको घटनाक्रमहरू स्थायी कमिटीको निर्णयविपरीत छ कि छैन ? किनभने स्थायी कमिटीले त दुई अध्यक्षबीचको सहमति, सिंगो पार्टीको एकताको कुरा गरेको छ । तर, सचिवालयमा किन अभियोगपत्रजस्तै दर्ज भयो ? त्यसैले कमरेड तपाईंहरूले त्यही स्थायी कमिटीको सहमतिका आधारमा पार्टीलाई अगाडि बढाउनुबाहेक अब अरू कुनै विकल्प छैन । तपाईंहरू दुईजनाले गर्न सक्नुहुन्छ । आधार तयार गर्नुस्, हामीले के सहयोग गर्नुपर्ने हो, गर्छौं । यो सिंगो पार्टीपंक्तिको धारणा हो । पार्टीलाई फेरि एकताबद्ध बनाऔँ भनेको छु ।
उहाँ (प्रचण्ड)ले पनि म यसमा प्रस्ट छु, मेरो सकारात्मक भूमिका रहनेछ । अझै पनि एकताको डोरी चुँडिसकेको छैन, अझै बाँकी छ, सबै चिज सिद्धिएको छैन भन्ने मलाई पनि लागेको छ । त्यसबारेमा मेरो भूमिका रहन्छ । तपाईंहरू पनि एकताको पक्षमा लाग्नुस्, मेरो सहयोग र समर्थन छ भन्नुभएको छ । उहाँले के छ अध्यक्षको कुरा भनेर सोध्नुभयो । मैले उहाँ (केपी ओली) अलिकति यस्तो त नहुनुपर्ने भनेर दुःखित त हुनुभो । त्यसकारण उहाँले आफ्ना कुरा त भन्नुहोला । किनभने अस्ति सचिवालयले समय दिएको छ क्यारे । तर, उहाँ पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जानुपर्छ । त्यसमा मैले जे भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यो खेल्छु भन्ने भन्नुभएको छ । त्यसपछि प्रचण्ड कमरेडले ठीक छ, त्यसैगरी जाऊँ भन्नुभो, राम्रो कुराकानी भयो ।
नेकपा सचिवालय बैठक सुरु, दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि छलफल
नेकपा सचिवालय बैठक बस्दै, दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने